Sirna Gadaa: Abbaan Gadaa yoo yakke akkamiin aangoorraa buqqisan? - BBC News Afaan Oromoo
Manni maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa himata pireezidantii biyyattii Donaald Tiraamp aangoorraa kaasuu danda'u sagalee caalmaan mirkaneessee jira.
Baatii tokkoon duuba pireezidantichi seneetii biyyattii duratti dhiyaatee himata aangoo isaa seraan ala fayyadamuu irratti banameen yakkamaa ta'ee yoo argame aangoorraa kaafama.
Taateen kun namni kamuu seeraan ol akka hin taanee fi diimokiraasiin Ameerikaa hagam jabaa akka ta'e agarsiisa kan jedhan danuudha.
Mee sirna Gadaa akka madda diimokiraasiitti fudhatamutti as deebinee yoo Abbaan Gadaa baallii of harkaa qabu yakka raawwate akkamiin aangoorraa ka'uu akka danda'u haa ilaallu.
Odeessaalee biroo Sirna Gadaan wal qabatan:
'Gadaan kan baratamu qofa osoo hin taane kan itti guddatan'
Sirnichi ammoo 'Buqqisa' jedhamuun beekama jedhu qorataan sirna Gadaa Gujii Obbo Iyyaasuu Basaayyee.
Abbaa Gadaa tokkorraa karaa hedduun aangoon bahuu danda'a jedhu Obbo Iyyaasuun.
Sababni kun ta'uuf "kaayoon isaa Gadaa isaafis ta'e Oromoof hin toltu jedhamee waan amanamuufi" jedhu.
Yoo kun ta'u baalliin Gadaa isaarra tartee warra Doorii silaa waggaa saddeet booda aangootti dhufuuf kennamti jedhan.
Kun yoo ta'u baalliin isaa uummata isaaf hin tolle jedhamee waan amanamuuf akkasuma baalliin dabarfamee Gadaa itti aanuuf kennama.
Kan sadaffaa yoo Abbaan Gadaa yakka uummata keessatti fokkisiisaa ta'e, kan hamilee fi kabajaa uummataa tuqu yoo dalagedhaa jedhu.
Kun yoo ta'e garuu akka gaaf kaanii baalliin Gadaa itti aanuuf osoo hin taane itti aanaa isaa kan 'irkisaa Abbaa Gadaa' jedhamee beekkamuuf kennama.
Abbaan Gadaa tokko yakka raawwachuu isaa miseensotuma Gadaa isaa dabalatee miseensonni Gadaa biroos himachuu danda'u.
Miseensonni Gadaa isaa aangoon isaan harka waan jiruuf "yakka lafaafi namaa, kan marraa malkaarratti raawwatame argaa hin callisanuu" jedhu Obbo Iyyaasuun.
Sirna Gadaa Gujii keessatti yaa'a sadiitu jira. Isaaniis Uraagaa, Maattii fi Hookkuu jedhamu.
Yaa'i sadanuu Abbaa Gadaa mataa ofii qabu. Abbootiin Gadaa kunneen lafaa ofii bulchan ykn Gabalaa addatti qabu.
Haganaa Salgan jechuun abbootiin murtii yaa'a sadan, yaa'a tokkorraa nama sadi, yaa'a sadan irraa namni sagal walitti yoo dhufan qaama uumamu.
Yakki Abbaan Gadaa raawwate Haaganaa salgan kanaaf dhiyaatee yoo irratti mirkanaa'e, isaanuma keessa aangoon murtii kennuu kan kennameef 'Waamura' kan jedhaman aangoorraa akka kaafamu itti murteessu jedhu Obbo Iyyaasuun.
Akkaataa kanaan baalliin Abbaa Gadaa harkaa fuudhame 'irkisaa Abbaa Gadaaf' kennama.
Akka sirna Gadaa Gujiitti gumiin kan taa'u Abbaan Gadaa tokko baallii fuudhee waggaa shanaffaa irratti yoo ta'u sirnichi 'Jaarraa Utaaluu' jedhamee beekama.
Me'ee Bokkoo bara 2016
Gumiin waggaa saddeet keessatti al tokko qofa kan taa'u yoo ta'u gumiin dura ykn booda Abbaan Gadaa tokko yakka raawwannaan haganaan saglan aangoorraa buqqisuu danda'u jedhu hayyuun aadaa Obbo Iyyaasuun.
Sirni Gadaa haala ittiin aangoo Abbaa Gadaa to'atu mataa isaa danda'e 'Walaannaa fi Qadadduu' jedhamu qaba.
Gadaa shanan keessaa Gadaan lamaan Abbaan Gadaa aangoorra jiru baallii irraa fuudhatee fi kan inni itti kennu lamaan 'Walaannaa' jedhamu.
Kan hafaan lamaan ammoo 'Qadadduu' yoo jedhaman isaan ammoo deeggartoota Abbaa Gadaa aangoorra jiruuti.
Warri Walaannaa "bara Gadaa keetii yakka akkanaatu jira, barri Gadaa keeti yaraa jedhee akka inni kaayoo dansaa deebifatu ittiin morma" jedhu.
Haa ta'u malee mormiin Walaannaa irraa Abbaa Gadaa mudatu akka inni jabaatu malee aangoorraa isa buusuuf miti jedhu Obbo Iyyaasuu Basaayyee.
Kanaaf Abbaan Gadaa yoo mormiin Walaannaan aangoorraa hin bu'u jechuudha.
Aadaa Oromoo: Abbaan Gadaa Booranaa maalif ijoollummaatti filame
Gadaa Booranaa: Jilli 'Gooroo Marmaaruu' maali?
6 Sadaasa 2019